mma ebudatara 3 afọ 3 ọnwa gara aga #355
Nke mbụ ka m kwuo na ị na-enye nnukwu ọrụ, gụnyere nke a "na-akwụghị ụgwọ", iji nwee mmasị na Flyers dị ka m! Site na ebe nrụọrụ weebụ gị, ebudatala m ụfọdụ ụgbọ elu, di na nwunye nke ndị tozuru etozu dị ka mkpọ Boeing 777-200ER Ultimate, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na eji m ụgbọ elu a. FSX Mpempe ọla edo na ngwugwu osooso.
Ọ ga-amasi m n’otu ihe nlele ọdụ ụgbọ elu nke ebudatara anaghị arụ ọrụ nke ọma, anwalela m ya na ọdụ ụgbọ elu abụọ, nke mara mma n'ụzọ a: Klagenfurt Airport (Austria) na Richmond International (VA) USA , ha abụọ nwere nsogbu na sistemụ ọdịda ala ILS, nke mbụ na-emetụta ụgbọelu megide ihe 30 ụkwụ na-adịghị ahụ anya nke dị n'elu 28; nke abụọ (Richmond) na ILS 02 na-eme ka ụgbọelu na-aga njedebe njedebe nke runway kama mmalite nke 02 runway.
N'okwu abụọ a, emeghela m Ihe nlere ọhụrụ ndị a na ma ILS na-arụ ọrụ zuru oke.
Inwere ike ịnwe ihe ngwọta maka nke a amaghị m.